Taariikhda Kongo - Fondation Afrikhepri
Welcome XUKUUMADA AFRICA
min aqri 10 min
Dadka madow "KONGO" waxay ka soo jeesataa ilaah kasta oo awood leh oo magacoodu soo socda: omakongo okongo ne kongo kalunga ...
Markii ay awowayaasheennu raadinayeen dhul ballan qaadaya "kongo dia ntotela" oo ka yimid Itoobiya, nzambi'a kongo kalunga ayaa u sheegay aabayaasheen:
Waa jacayl aan u abuuray aadanaha. Oo dadkaygiina iigu jeclaada, magacayga ha u diidin. inaan u yeedho jacaylka; waxa uu sheegay inuu u yeeray "Ne kongo kalunga" (jaahil ah oo ilaah ah) jacayl iyo xigmad iyo sirdoonkiisa wuxuu abuuray adduunka iyo dhamaantiisa; Wuxuu u sheegaa awowayaasheen inay u yeedhaan "waa maxay munaafiqiintu? Awoodiisa uu xukumo adduunku, wuxuu u sheegaa awoowayaasheena in ay ku magacawaan "ne mpungu tulendo" (idnipresent god).
Sidaas darteed magaca "kongo" waa asalka asaxaabta iyo luqadda "kikongo".
Saacadda runta ayaa ku dhawaaqday adduunka ...
Chronology of Bena Kongo
Sanadkan 4200 ka hor xilligii kalluunka, qabiilooyinka Bena Kongo waxay ka baxeen Itoobiya waxayna u soo degeen Niil.
Midabada waaweyn ayaa soo ururiyay oo go'aansaday in ay helaan waddan ay ku magacaabeen: ekipata (het ka ptah = Aiguptos = Masar).
Sannadkii hore 4000 ka hor xilligii kalluunka, ngipiti (Masar) waxay ahayd dalkii ugu horreeyay ee horumaray ee adduunka, dhammaan dhinacyada: Diinta, siyaasadda iyo farsamada.
Quruumaha dunida oo dhammu waxay u soo galeen dalka Masar, oo waxay ku baadheen xigmad iyo inay raalli ka noqdaan. Dhibaatooyinka ajaaniibta ee dhammaan jinsiyadaha, cudurada ayaa bilaabay in lagu soo bandhigo dalka oo dhan.
Sannadkii hore 1300 ka hor xilligii kalluunka, Firatada Kenya (Akhenaton) ayaa kacday waxayna bilaabeen inay la dagaallamaan xanuunka.
Ka dib dhimashadii Kenatu, cudurrada ayaa dib uga bilowday Masar.
Bena kongo taribu waa lagu xadgudbay oo waxay doorbideen inay ka baxaan Masar oo ay u cararaan Itoobiya.
Sanadkan 960 ka hor kalluunka ereyada boqoradda Saba (makeda) ee qabiilka reer bena kongo waxay guursadeen Boqor Sulaymaan reer binu Israa'iil. Guurkani wuxuu u heellanaa haajiraad badan oo Bena Kongo ah oo u yimid inay si xor ah u degaan Israel. Dadka Falasha ah (Betha Israel) ayaa ka yimid guurka.
Sannadkii hore 220 ka hor xilligii kalluunka, "Ne muanda kongo" waxay u muuqatay nabi mambemba zulu wuxuuna ku ammaanay himilada hogaaminta aqalka kongo.
Sida ku cad hoggaanka Mombasa, Bena kongo ayaa ka tagay Itoobiya dhul ay magacawday dharbaaxo ah (sanctuary) oo maanta Zimbabwe ah.
Ka dib dhimashada mbemba zulu, "Ne muanda kongo" ayaa nadiifiyey nabiigii isanusi oo noqday hoggaamiyaha kiniisadda bena kongo. Kadib Zimbabwe, iyada oo hogaaminta nabiga mbangala, haweeney haysata sagaal koofiyadood, ayaa kuyaala kongo waxay galeen xeebta Kalahari. Tani waa meesha ay bilaabeen in ay guursadaan gabayga. Isbahaysiga mujaahidiinta (Bena kongo) iyo pygmies waxay soo saareen hiddaha (bahele) ee Namibia, oo maanta munaasabadaas ku hadlaya luqadaha la mid ah kuwa ragga ah.
Sannaddii 320 Zaman kalluunka hoos imaanaya hoggaanka Nabiga nsakulu ku nkanda Kongo Bena uu u suurtogashay in ay dalka reer kuandu qaado, kubangu, okavambu, Kunene (dalkii reer Kongo dia Mpangala).
In 424 Zaman kalluunka hoos imaanaya hoggaanka kodi Nabiga puanga Kongo Bena ayaa u suurtogashay in ay dalka reer Kuangu, luangu, Kuilu, Lulua qaado iyo in la dhiso dia ee Kongo Kuimba. Ka dib markii dia Kongo Kuimba Kongo Bena waxay tageen dalkii reer Katanga dhufsan. Gaaray Katanga, Kongi Bena ku guursaday la Katanga. From ururka this waxaa u dhashay qabiilooyinka Balunda iyo tukongo ee Katanga.
In 529 Zaman kalluunka hoos imaanaya hoggaanka Nabiga tuti ka dia Kongo Bena tiya dhulka la gumeysto ee Vumba nzaza (Saxamo bateke) oo iyana way dhisi doonaan dia Kongo luangu ah.
690 ee xilligii kalluunka, oo ku hoos maray hogaaminta Nabiga Nimi a lukeni Bena Kongo waxay qabsadeen dhulka Kanza waxayna dhiseen magaalada Mbanza Kongo ee Kongo dia ntotela.
691 ee xilligii kalluunka ahaa dhamaadkii dhismaha ee mbanza kongo oo ka hooseysa culuumta weyn: masema ntoko.
In 689 1200 in Zaman kalluunka waa magacyadii boqorradii u talin boqortooyada Kongo: King muabi Mayidi, zananga mowa, mbala Lukeni, Mbama bakota, ngongo Masaki, Kalunga Punu, nzinga Sengele, Nkanga Malunda, Ngoyi Malanda nkulu kiangala, ngunu kisama.
1227 ee xilligii kalluunka ee Mandingo King vuzi wuxuu awood u leeyahay inuu mbanza kongo awood u yeesho.
Sharciga xurmaysan wuxuu ku xadgudbay. Abaaro aad u weyn oo ku dheehan dalka. Kimozi Nebi Nuux wuxuu ka soo horjeedaa jiritaanka bulshanimada.
Sanadka 1230 ee xilligii kalluunka Nanga katanga King wuxuu xakameynayaa xaaladda bulshada. Dhammaadka abaarta. Waxyaalaha ruuxiga ah iyo madadaalada.
Ka dib markii Boqorow kuende kabinda iyo Boqorka weyn ee loo yaqaan Kunene oo soo diray mawqifka weyn ee "kongolo" si uu u tago siyaasad ahaan gobolka gobolka bari ee boqortooyada kongo ee lualaba. Balubaa jilbaha ayaa isaga kici doonta, oo isaga dila, oo dhabarka u jeediya xagga sharciga.
Laakiin in la dilo "kongolo" waa in la burburiyo goobada isku mid ah iyo isu keento dadka la doortay.
Si loo dilo "kongolo" waa inuu ka hor tago qaansoroobaad, godka qorraxda "ne muanda kongo" ee wareega uu calaamad u yahay.
In la dilo "kongolo" waa in la dilo kongo, waa inay ka soo horjeedaa qorshaha "muanda kongo" ilaashaha iyo dhexdhexaadinta Bartamaha Afrika.
Dhaqanka Kongo ayaa markaa ka hadlaya inkaaraha cabsida leh ee muusikada wayn ee "kongolo"
Dadka gobolka ayaa loo qaybiyay laba kooxood:
- koox ka mid ah daacad u ah mugdiga weyn "Kongo"
- koox ka mid ah dadka ka soo horjeeda ee ugu dambeyntii la wareegay.
Guddiga of mbanza boqortooyada Kongo siiyey xornimada gobolka this si adag congolisée iyo go'aansaday in soohdinta reer boqortooyadiisa ee Kongo ayaa waxaa sidoo kale ku soo laabtay Zambezi River, Webi Lulua ah, mumboyo ee Katanga, oo Kasayi ah webiga Nsanga-.
Kala soocida kongo iyo lualaba ayaa ku guuldareystay.
Sharciga Sharciga ah wuxuu ku xadgudbay boqortooyadii Boqor Woyo Mpalanga.
"Ne muanda kongo" waxay kor u qaadday nebi Kutumi oo ka soo horjeeda kacdoonnada bulshadeed taas oo dhalisay in dib loo furo ruuxa waddanka.
Laga bilaabo sanadka 1300 illaa sanadka 1369 wuxuu ku guuleystey inuu mbanza kongo ku guuleysto boqorka boqorka oo ah boqorka nanga mutombo boqorka nzinga nuzoma.
Laga soo bilaabo sanadka 1370 ilaa 1481 boqorradii xukumayay boqortooyada kongo waa: boqor khan ah, boqorka nkuwu mutimu king nzinga nkuwu.
In 1457, waxaa jiray kacdoon nebi Buanda oo ku dhawaaqay soo galitaanka reer galbeedka (maskax) dhulka ku yaal Kongo iyo ujeedooyinkooda.
In 1471 ayadoo la raacayo nidaamka nzinga nkuwu maskaxda (galbeedka Portugal ee soo galootiga ah) waxay yimaadaan kongo dia luangu taas oo ay ku magacaabaan magaca rio de gabao ama magaca Gabon. Portugiisyadan waxay ka yimaadeen Yurub iyaga oo u marinaya jasiiradda Kalunga oo ay bixiyaan magaca Sao Tome.
Sanadkan 1482 oo ah Portuguese Portuguese Diego CAO ayaa imanaya afka maylka webiga oo magaciisa lagu magacaabo Zaire adigoo ku turjumaya erayga nzadi (webiga).
3 ayaa laga yaabaa in 1491 boqorka nzinga nkuwu diinta kiristaanka iyo baabtiisay sidaas darteed furitaanka habka loogu dhex galo kiristaanka ee boqortooyada kongo.
Halka kabtanka Portugal Luiz da souda iyo basaasiin wadaaddadii iska hadlaan ilaah mbanza Kongo askari kale Portugal ayaa weli dekedda Pinda weeraraan Bakongo degganaa gasiiradaha mbemba Buula, mbulukolo, Malela iyo Mateba for qabtay Shaqaale madow ah oo iibinaya galbeedka!
Laga soo bilaabo taariikhdan, dadka yurubta ah ayaa hadda loo yaqaan "maan-dooriye". Kikongo waa ereyga mundele (maskaxda jamaca) waxaa loola jeedaa argagixisada, xagjirnimada ama jinniga. Erayga cad waa Kikongo: mpembe.
Dadka deggan mbanza kongo waxay u qaybsan yihiin laba xero:
1) xerada ka mid ah dadka raacsan diinta kiristaanka ayaa ku wareegsanaa neo mvemba nzinga ina boqorka nzinga kuwu.
2) isticmaalka taageerayaasha xerada siidaayay dhaqanka (fukiansi) raaciyaa hareeraha ma Mpanzu nzinga ayaa sidoo kale aan loo yeedhin Mpanzu lumbu wiil kale oo King João I ee Kongo.
Sanadkan 1506 boqorka nzinga nkuwu wuxuu ku dhintay mbanza kongo. Golaha boqortooyada waxay doorteen inaanan carshiga qabsan.
Sannadkii hore 1507 ayaa afduubay boqorkii Boosaasiyaanka 'budhcad-badeedkii' oo ahaa codsi ka yimid wadaaddada wadaaddada.
Ninka wadaadada katooliga ah maaha mid mowqifka carshiga boqortooyada monganza kongo.
In 1518 ee Rome Pope Leo x quduus ah Lukeni lua nzinga noqda hoggaamiyaha koowaad ee Catholic ah. lukeni lua nzinga ahaa wiilkii boqorka mvemba nzinga.
26 August August 1641 ciidamada Dutch ayaa hoosta ka xariiqay gumeysiga guud ee konelis hendrick waxay soo weerareen boqortooyadii kongo waxayna ka soo dhex baxday gacanta Portuguese.
14 Oktoobar 1641 ayaa Dutch ah waxay qabsadeen magaalada mbanza kongo.
In 1654 aabaha Jerome ee Montesarcio ku socdo socodka kongo dia mbe ayaa markii ugu horeysay la kulmay "makoko", ka dib markii qaar ka mid ah dibadbaxyada makoko, aabaha Jerome wuxuu yidhi:
"Waxaan arkay makoko indhahayga, ninkii awoodda u leh inuu ku boodo ama wax kasta oo uu doonayo. "
Laga soo bilaabo 1702 ilaa 1706 madaxdii weynaa ee kongo "ne muanda kongo" ayaa nadiifiyay nebi nebita ah.
Waxay ku guulaysatay inay soo kiciso dhammaan barko iyo inay dib u dhisto magaalada mongza kongo oo iyadu u waxyoonay oo waxay bilaabeen inay la dagaallamaan diinta reer galbeedka ee wajiga kongo.
Askarta reer Portugal oo ku saabsan amarada of Church Catholic ah, Aabbaha Lorenzo da Luca iyo Aabbaha Bernardo da Gallo ay joojiyeen nebiyaddii VITA Kimpa iyo gubay nool on July 2 1706.
1758 badan oo bakobo ah oo lagu xiro Haiti ayaa bilaabay dagaalkii madax-bannaanida iyada oo loo marayo hoggaanka magaca makandala ee reer galbeedka ee macdanta nd.
1877 henry Morton wuxuu u yimid kongo isagoo raadinaya dhul si loo qabto.
1880 Savorgnan de Brazza waxay u timid mongo dia mbe waxayna ku dhawaaqday makoko sida boqor.
In 1881 Stanley Stanley waxay u dirtay basaas si ay u burburiyaan magaalada mbanza kongo.
1885 reer galbeedku waxay ku kulmeen shirkii Berlin si ay u wadaagaan Afrika (Katiopa) sida keegga dhalashada. Waxay kala qaybiyeen Boqortooyada Ingiriiska afar qaybood: Kongo zaire (Belgian), Kongo brazza (Faransiis), Kongo Angola (Portugal) iyo Kongo Gabon (France).
1921 "ne muanda kongo" ayaa ku dhawaaqay nabi uumiga kimbangu inuu noqdo hoggaamiye kaddibna toosay dhamaan barkoos. Iyadoo farriinta Nabiga Kim Kimbangu Bakongo badani diidday diinta galbeedka.
Laga soo bilaabo 1926 ilaa 1942 waxaa kacay kacdoonkii kongo sia mfua (Brazza) nabi Muxammad Matsu oo ka soo horjeeday diinta galbeedka.
1933 "ne muanda kongo" ayaa ku dhawaaqay nabi Muxamad khaaki in uu hogaamiyo banguza oo uu la dagaallamo diinta galbeed ee dhulka kongo.
In 1939 Nebi Nuux oo keli ah ayaa aasaasay kiniisadda madaw ee Afrika ee Nebi Simon Kimbangu (Enna).
1954 mbuta kasa vubu waxaa loo doortay madaxweynaha abako.
1956 mbuta diangienda kuntima ayaa abuuray kaniisadda kimbanguist. Isla markaa Angola, Bakobo waxay la kulmeen oo ay aasaaseen dhaqdhaqaaq siyaasadeed "mpla" (dhaqdhaqaaqa caanka ah ee madax-bannaanida Angola) ee madaxa ka ahaa Dr. mbuta Agostino Neto.
1958 mbuta yala cain nkongo waxaa loo doortay madaxweyne kongo Brazza.
Bishii Janaayo 4 1959, abako waxay dalbadeen madaxbannaanida kongo. 30 Juun 1960 Kinshasa Kongo ayaa xor u ah madaxbannaanida madaxweynaha mbuta kasa vubu.
15 August August 1960 Kongo Brazza ayaa xorowday.
17 August August 1960 Gabon kongo ayaa xorowday.
Bishii November ee 11 1975 Angola Kongo ayaa xorowday.
Bishii November ee 24 1965 oo ku hoos jirta taliska guud ee Mobutu ciidamada Congolese waxay sii wateen Mbita Kasasa vubu waxayna awoodda u siisay Mobutu.
Written by JKC (dhalinyarada xorniyaadka ee maskaxda)
Cayaarta video ee Afrika: fursadaha iyo hantida